Kilalao - Wikipedia
Ny kilalao dia hetsika voarafitra, entin'ny fitiavana manao azy, ary tsindraindray atao mba hianatra zavatra. Ny Kilalao dia samihafa amin'ny asa, zavatra atao ho an'ny karama azo amin'ny fanaovana azy, sy ny taozavatra, zavatra atao ho an'ny fanehoana ny heviny. Na dia izany aza, tsy mazava ny zavatra mahasamihafa azy ireo, ary maro ny kilalao (ny mpilalao matihaninna ohatra) lazaina fa asa sy ny taozavatra lazaina fa asa.
Pieter Bruegel l'Ancien - Jeux d'enfants (Kilalaon-jaza) - 1560
Ny zavatra manondro ny kilalao dia tanjona, fitsipika ary fifaninanana. Ny lalao dia matetika mamporisika ny fampiasana ny hatsilon-tsaina na ny hery, ary tsindraindray izy roa no ampiasaina.
Paul Cézanne, Les Joueurs de Carte (Mpilalao Karatra), 1892-1895
1 Ny kilalao sy ny fampianarana
1.1 Ny kilalao ho fitaovam-pampianarana
1.2 Ny lalao sy ny fianarana
2.2 Rohy ivelany
Ny kilalao sy ny fampianaranaModifier
Ny kilalao ho fitaovam-pampianaranaModifier
Mandritry ny ela, ny mpampianatra dia nanambany ny kilalao. Ho an'i Herbert Spencer, ny « kilalao dia fampiasana ny ambon-kery mihoatra, karazana sopapan'ny tanora. » Na dia nanana mpisolo-vava aza ny kilalao tamin'ny mpampianatra tamin'ny Tantara (azo lazaina Platona na John Locke, filôzôfy grika sy anglisy niaina tamin'ny taonjato faha 17), ny anjara asan'ny filalaovana amin'ny fivoaran'ny zaza dia tsy fantatra ary nambaniana raha tsy tamin'ny taonjato faha 20.
Ny lalao sy ny fianaranaModifier
Ny lalao pedagôjika dia manana anjara amin'ny fahazoana ny fahaizana. Eken'ny mpampianatra ankehitriny fa ilaina ny milalao, ho an'ny antony manaraka :
Ny ankizy dia tia ary mila milalao. Ny fianarana zavatra (lesona) dia hita fa mankaleo rehefa ela ny ela, ka mety ho tiany ny mianatra rehefa atao kilalao ilay izy.
Ny mpilalao dia miaraka milalao ary tsy varindriana intsony ilay zaza mianatra satria ao amin'ilay kilalao no heritreriny rehetra fa tsy any amin'ny zavatra hafa, tsy tahaka ny fianarana tsotra ilay mila mihaino lalandava ary mety mitondra ny eritreritr'ilay ankizy eny ankafa.
Ny faharesena dia manamafy ny fitairana.
Roger Caillois, "Les jeux et les hommes", Gallimard, 1957 (ISBN 2-07-032672-1)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilalao&oldid=971684"
Dernière modification le 26 Jiona 2019, à 02:27
Voaova farany tamin'ny 26 Jiona 2019 amin'ny 02:27 ity pejy ity.